किन डुबिरहन्छ हाम्रो तराई ? तराई डुबानको कारण र समाधान के ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more किन डुबिरहन्छ हाम्रो तराई ? तराई डुबानको कारण र समाधान के ? - www.khabardabali.com
किन डुबिरहन्छ हाम्रो तराई ? तराई डुबानको कारण र समाधान के ?
साउन ७ गते, २०७६ - १२:२४
काठमाडौं । नेपालको तराई वर्षेनी डुबानको समस्यामा परिरहेको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष डुबानको कारण ठुलो संख्यामा जनधनको क्षति पनि भईरहेको छ । डुबानको सन्दर्भ चर्चा चल्दा भारतीय पक्षले बनाएका बाँध, तटबन्ध र अन्य संरचनालाई पनि कारण मानिएको छ । भारतीय पक्षले मापदण्ड विपरितका कतिपय संरचनाहरु बनाउँदा नेपालतर्फ ठुलो क्षति भएको भन्ने विद्हरुको ठम्माई पनि छ ।
केहि सातादेखि परेको अरिबल वर्षाको कारण आएको बाढीले तराईको ठुलो भू–भाग डुबानको चेपटामा परिरहेको छ । बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पनि हुन पुगेको छ । अझैपनि तराईका कतिपय भू–भागहरु डुबानमै छन् ।
ठुलो जनधनको क्षति गराउने तराईको डुबानको कारण के हो त ? के तराई डुबानको कारण प्राकृतिक मात्रै हो ? के डुबान हुनुको कारण हामी नै हौं ? किन वर्षेविच्छे डुबानको चपेटामा पर्छ ? भारतीय संरचनाहरु डुबानका कारक हुन कि होइनन् ? समाधान कसरी गर्ने ? यसै सन्दर्भमा खबर डबलीले सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मधेश विद् डा. राजेश अहिराज र राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग कुराकानी गरेको छ । श्रेष्ठ, अहिराज र खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
साउन ७ गते, २०७६ - १२:२४ मा प्रकाशित
डुबानको कारण भारतीय मनपरी संरचना नै हाे
काठमाडाैं । नेपाली भू–भागबाट बग्ने पानी रोक्नको लागि भारतले अनेकन खालका संरचनाहरु बनाएको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा ड्याम, ठुला खालका तटबन्ध, नहरलगायतका संरचनाहरु धेरै नै खडा गरिसकेको छ । पछिल्लो समय त उसले पुर्वदेखि पश्चिमसम्मै सीमा क्षेत्रमा सडकको नाममा अग्लो बाँध नै बनाएको छ । राजमार्गको नाममा बनाइएको त्यो संरचना १० फिट अग्लो र ९० फिट जति चौडा छ । यी संरचनाहरुले वर्षाको समयमा परेको पानी र नेपालबाट भारततर्फ जाने सबै नदिहरुको प्राकृतिक बहाब रोकिदिएसँगै तराईमा डुबानको समस्या बढिरहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच अहिलेसम्म ब्यारेज बनाउन जम्मा एउटा सम्झौता भएको छ । तटबन्ध बनाउनको लागि ४ वटा जति सम्झौता भएको छ । तर, भारतले एकतर्फी हिसाबले धेरै संरचनाहरु खडा गरिसकेको छ ।
जस्तो कपिलवस्तु जिल्लाको दक्षिणमा सीमा नजिकै भारतले मणीसागर बाँध बनाइएको छ । त्यो बाँध बनाउनको लागि सन् १९२३ मा ब्रिटिस अंग्रेजसँग नेपालको सम्झौता थियो । सम्झौतामा बाँध बनाउँदा ढोका नहाल्ने भन्ने थियो । तर, वर्तमान भारतले १४ वर्ष अगाडि मात्रै १५ वटा ढोका बनाइएको छ । जसको कारण कपिलवस्तुको त्यस छेउछाउका भू–भाग पुरै डुबानमा पर्दै आएका छन् । वर्षाको बेलामा ७० हेक्टर जति जमिन डुबानमा पर्दछन् । त्यहाँ हिउँदको बेलामा पनि १५ हेक्टर जति जमिन क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ ।
जबसम्म मापदण्ड विपरित यी संरचनाहरु खडा रहिरहन्छन् अनि नयाँ संरचनाहरु बनिरहन्छन् तबसम्म तराई डुबानको समस्या झनै बल्झदैं जान्छ ।
सम्झौता ब्रिटिश इण्डियासँग गरिएको सन्दर्भमा अहिले भारतले आफ्नो मगलाग्दी हिसाबले काम गरिरहेको छ । नेपाल र नेपालीले विरोध गरेपनि संरचनाहरु निर्माणको काम भने रोकिएको छैन् ।
दुई देशको सीमाको छेउछाउमा ब्यारेज, बाँध र तटबन्धजस्ता संरचनाहरु बनाउँदै गर्दा केहि अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै देशको सम्झौता बेगर त्यस्ता संरचनाहरु बनाउन पाईदैन् । तर यहाँ सम्झौता विपरितका संरचनाहरु बनिरहेका छन् । जसको कारण तराईमा सधैं डुबानको समस्या परिरहेको हुन्छ ।
एक देशबाट अर्को देशमा जाने नदिको सिमारेखाबाट ८ किलोमिटर माथिल्लो वा तल्लो क्षेत्रमा कुनै देशले सहमति नलिई कुनै संरचनाहरु बनाउन पाईदैंन भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छ । त्यो सम्झौतालाई सन् १९९९ मा दुई देशबीच पटनामा भएको वैठकमा पनि स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको थियो । तर, सहमति त्यस्तो भएपनि सिमा छेउछाउमा धेरै संरचनाहरु बनेका छन् ।
जस्तो बाँके जिल्लाको सिमामा लक्ष्मणपुर बाँध बनाइएको छ । २२ कि.मि. लामो त्यो बाँधले प्रत्येक वर्ष नेपालको ठुलो भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । अहिले पनि नरइनापुर गाउँपालिकाको भाग पुरै जलमग्न भएको छ ।
यता रौतहटमा पनि त्यस्तै समस्या छ । रौतहटको सिमा नजिकै बनेको बैरगनिया बाँधले यो वर्ष त झन् धेरै क्षति बनाएको छ । गौर सदरमुकामका धेरैजसो घरहरु १ तलासम्म डुबानमा परे ।
जबसम्म मापदण्ड विपरित यी संरचनाहरु खडा रहिरहन्छन् अनि नयाँ संरचनाहरु बनिरहन्छन् तबसम्म तराई डुबानको समस्या झनै बल्झदैं जान्छ । राज्यले आफ्ना जनता अनि भूगोलको रक्षा गर्ने नियम विपरित खडा गरिएका संरचनाहरु फाल्नको लागि पहल गर्नुपर्छ ।
(श्रेष्ठ सीमाविद् हुन् )
काठमाडाैं । बाढीको सन्दर्भमा भारतको चर्चा धेरै आएको छ । म भन्छु, भारत नेपाल होइन् । भारत छुट्टै मुलुक हो । कुनैपनि मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि आफ्नो ढंगले काम गर्न सक्छन् । त्यसलाई हामीले नराम्रो मान्न मिल्दैन् । हामीले पनि हाम्रा नागरिकलाई कसरी सुरक्षा दिने, कसरी जोगाउने, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
बाढीको समस्या कुनै भौगोलिक वा राजनीतिक समस्या पनि होइन् । न यो सीमाको समस्या हो । चर्चा गरिए अनुसारको राजनीतिक रंग दिइनु उपयुक्त छैन् । यो विसुद्ध मानवीय तथा प्राकृतिक समस्या हो । यो समस्यालाई मानवताको आँखाले हेर्नुपर्छ ।
कुनैपनि मुलुकले आफ्नो नागरिकलाई जोगाउनको लागि आफ्नो अनुकुलताका संरचनाहरु निर्माण गर्दछ । आफ्नो सीमाभित्र अनि आफ्नो भूगोलभित्र गरिने कामलाई अर्को मुलुकले दखलअन्दाजी गरिने कुरा मिल्ने विषय होइन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा बाढी नियमित समस्या हो । यो कसैको लागि दुःख अनि कसैको लागि आम्दानीको स्रोत पनि हो ।
नेपालीहरुले भारत डुबोस् भनेर संरचना पक्कै बनाएका छैनन् । भारतीयहरुले पनि नेपाल डुबोस् भनेर संरचना पक्कै बनाएको हाेइन् । यी संरचनाहरु आ–आफ्नो मुलुकभित्र आ–आफ्नो भूगोलभित्र सबैले आ–आफ्नो नागरिकाको लागि केहि न केहि बनाएको छ ।
यहाँ हरेक वर्ष बाढी भित्र्याउने अनि करोड ल्याएर हजार बाँड्ने आम्दानीको खेलो चलाइएको छ । यो एउटा आम्दानीको विषय र अर्को राजनीति गर्ने सेन्टिमेन्टको विषय पनि बनेको छ ।
तैपनि समस्या ति संरचना होइनन् । समस्या अव्यवस्थित बसोबास हो । समस्या चुरे दोहन हो । समस्या जथाभावी रुख काट्ने तर वृक्षारोपण नगर्ने हो । समस्या खोलानालाको नियमित व्यवस्थापन नुहुनु हो । यो प्राकृतिक समस्या मात्रै नभएर मानव निर्मित प्रकोप पनि हो ।
यो दुवै देशको साझा समस्या हो । किनकी हिमालको पानी नेपालले मात्रै छेकिराख्ने अवस्था छैन् । र, आएको बाढी नेपालले तटबन्ध बनाएर आफैंतिर रोक्ने वा छेक्ने भन्ने पनि हुँदैन् । प्राकृतिक नियम अनुसार पानीले आफ्नै बाटो लिन्छ । यो दुवै देशको प्राकृतिक र मानवीय साझा समस्या भएको हुनाले त्यहि ढंगबाट समाधान खोजिनु पर्दछ ।
चाहे नेपालमा डुबानको कारण मानिसहरु समस्यामा परुन या भारतमा यो सबैको चिन्ता अनि चाँसोकाे विषय हो । यो विषयलाई मानवताको कोणबाट हेर्न आवश्यक छ । बाढी नियमित समस्या हो । जसमा जनताको लागि दुःख तर केहि त्यस्तो तप्काका लागि आम्दानीको विषय पनि बनेको छ ।
जो पात्र राहत र उद्धारको लागि नाटक गर्छन् ती पात्रहरु बाढीभन्दा पहिला बाढिबाट मुक्तिको लागि कुनै व्यवस्थापन गर्दैनन् ।
हरेकलाई यति लाख दिन्छु, यस्तो घर बनाईदिन्छु भन्नेहरु बाढीभन्दा पहिला बालुवाको कटान जोगाईदिन, तटबन्ध गराउन, वृक्षारोपण गराउन सोंच्दा पनि सोंच्दैन् । तर, यहाँ हरेक वर्ष बाढी भित्र्याउने अनि करोड ल्याएर हजार बाँड्ने आम्दानीको खेलो चलाइएको छ । यो एउटा आम्दानीको विषय र अर्को राजनीति गर्ने सेन्टिमेन्टको विषय पनि बनेको छ । चुनावताका मासु बाँड्नेहरु बाढीका बेला चिउरा पनि बाँड्दैनन् ।
चुरेमा जथाभावी दोहन, जथाभावी रुख कटानी अनि अव्यविस्थत बसाईले गर्दा पनि बाढीको प्रकोप झनै बढिरहेको छ ।
(अहिराज मधेश विद् हुन्)
काठमाडाैं । हाम्रो दुरभाग्य, हिउँदमा फाईदा भारतले लिने, वर्खामा हामी डुबानमा पर्ने । वर्खाको पानीले हामीलाई क्षति अनि हिउँदको पानीको उपयोग हामीले गर्न नपाउने । यो दोहोरो मारमा हामी छौं । यो कतिपय हामीले नै गरेका सम्झौताको कारण छ भने कतिपय भारतले सम्झौता विपरित नै बनाएका संरचनाका कारण हुन् ।
सम्झौता गरेको हकमा त एउटा कुरा हो तर, सम्झौता विना नै सीमा क्षेत्रमा जसरी अन्तराष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरेर बाँध बाँधिएको छ, यो सबैभन्दा समस्याको विषय हो । सीमामा बाँध बनाउँदै गर्दा जुन उचाई र दुरीको मापदण्ड छ त्यसलाई यहाँ पुरै उल्लंघन गरिएको छ । १० कि.मि. भित्रकै आसपासमा १० फिटसम्मका जसरी संरचनाहरु बनाइएका छन् त्यसले नेपाली भू–भागलाई डुबानमा पारिरहेको छ ।
डुबानको विषय राजनीति गर्ने मुद्दा होइन् तर दुरभाग्य नेपालमा यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । सत्ताबाहिर रहँदा कत्ति पनि जवाफदेही नहुने गरि बोल्ने अनि सत्तामा पुगेपछि पुरै नतमस्तक भएर मौन हुने परिपाटी बडो घातक छ ।
इ.पि.जि.को रिपोर्ट बारे दुवै देशका बीचमा छलफल हुन सकेको भए समाधान खोज्ने विषयमा आधार तयार हुन्थ्यो । तर त्यहि आधारको विषय नै अहिले अलपत्रमा परेको छ ।
सत्ताबाहिर रहँदा जसरी विषय उठाइएको थियो त्यसको समाधान सत्तामा पुगेपछि त हुनुपथ्र्यो तर, देंखिदैन् ।
हामीकहाँ कुटनीतिक ढंगबाट समाधान खोज्ने चलन छैन् । परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट, प्रधानमन्त्री स्तरबाट या अरु कुटनीतिक बाटोबाट यी बाँध बाँध्नु अगावै समाधान खोज्नु पर्ने थियो । यो विषयलाई द्धिपक्षी वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । यदि भएन् भने यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान पनि छ ।
हाम्रो सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले हाम्रा बस्तीहरु डुबानमा परेका हुन् । बाँध बाँध्नुभन्दा पहिला नै हामीले पहल गर्न नै सकेनौं ।
यो सन्दर्भमा इ.पि.जि.ले पनि रिपोर्ट बनाएको छ । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अलमल देखिएको छ । कमसेकम त्यो रिपोर्टको आधारमा धेरै कुराहरु समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको लागि नेपालले कुटनीतिक रुपबाट पहल गर्न अलि नसकिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
कमसेकम इ.पि.जि.को रिपोर्ट बारे दुवै देशका बीचमा छलफल हुन सकेको भए समाधान खोज्ने विषयमा आधार तयार हुन्थ्यो । तर त्यहि आधारको विषय नै अहिले अलपत्रमा परेको छ । तथापि यसको समाधान द्धिपक्षी रुपबाटै खोज्नुको विकल्प भने छैन् ।
(खनाल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)